Dubbii qulqullootaa Kutaa-1ffaa – Mana Kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itiyoophiyaaatti – WALDAA QULQULLOOTAA
Dubbii qulqullootaa Kutaa-1ffaa
February 9, 2016 /in Dubbii Qulqullootaa /by EOTC Afaan Oromo
Qulqulluu jechuun “qulqulleesse” kan jedhamu irraa kan dhufe yoo tahu hiikni isaas:-galateeffate,file,addaan baasee kabaje jechuu dha. Qulqullummaan bakka lamatti qoodamu danda’a.
A) kan kennaa (የፀጋ ቅድስና) waaqayyo irraa kennaadhaan(laataan) kan argame jechuu dha. Kunis kan laatamu uumamtootaafi dha. Ani waaqayyoo qulqulluu waanaan ta’eefi isinis qulqulluu ta’aa. Zel 19:2
B)Qulqullummaa Akkeenyaa(የባህርይ ቅድስና) kan jedhamu qulqullummaan isa irraa kan addaan hin bane,eenyuyyuu irraa fudhachuu hin dandeenye qabeenya mataasaa kan ta’e jechudha. Inni kun waaqa duwwaafi dha.
Jechi qulqulluu jedhu uumamtoota keessaa warra kana gadiif ooluu danda’a.
Ergamoota qulqulloota (ቅዱሳን መላእክት): Uumamaan qulqulloota kan ta’an jireenyi isaanii qulqullummaan kan guutame qulqullota dha. Addunyaa hafuuraatti (በመንፈሳዊ አለም) samii irrattis lafarrattis Waaqayyoo fi nama fuulduratti hojii hafuuraa hojjetu. Hojii kanatiin Waaqayyoo fi qulqulloota wajjin tokkummaa qabu. Sa’atii fi guyyaa uumamanii jalqabanii faarsaa fi galata Waaqayyoof dhiyeessuu irraa adda hin baane. Isa 6:7,ra’I 4:8. Galanni Waaqayyoof dhiyeessan boqonnaa isaaniiti, boqonnaan isaanii galata Waaqayyoof dhiyeessani dha. Kana wajjiniinis kennaa Waaqayyoo gara namaa,kadhaa fi aarsaa namaa immoo gara Waaqayyoo nuuf geessu. Dan 9:22,hoj.du. 10:4. Boqonnaa malee waaqayyo sa’aatii 24 guutuu kan tajaajilani dha.
Bakkeen Qulqullaa’oo( ቅዱሳን መካናት) :Iddoo hunda irraa adda ta’anii waaqayyoo hojii gurguddaa kan itti hojjete kan akka Gadaamii fi mannen kiristaanaa dha. Kanaaf bakka filatame waan tahef Waaqayyo museen bakka Dabra Siinaatti waamee akkas jedhe:Seera bah.3:5 as hin hiiqiin iddo ati dhaabatte qulqulluu waan ta’eef kophee kee miila keerraa baasi. Iya 5:13-15 manni kiristaana keenya fakkeenya kana godhattee kophee keenya akka miila keenya irraa baasnee gara mana qulqullummaa akka seennu nu ajajji. Qulqulluun Pheexiroos immoo ulfina mootummaa gooftaa keenya Iyyesuus kiristoosin,waaqummaa Isaa bakka Dabra Taaboritti yeroo nuuf ibsetti akkasumas tokkummaa fi sadummaa ifatti yammuu nu hubachiisetti yaadachuun “Gooftaan keenya Iyyesuus kiristoos humni isaa,deebi’ee dhufuun isaas isin biratti akka beekamu yammuu goone,nuyi surraa guddina isaa ija keenyaa arginee beeksifne malee,mammaaksa ogummaadhaan yaadame duuka buune miti. Inni Waaqayyo biraa ulfinaa fi guddina yammuu fudhate sagaleen “kun ilma koo isa ani Jaalladhu,isa gammachuun koo itti raawwatamu dha” jedhu isa guddicha surra-qabeessa” sana biraa dhufeeraafii,Nuyi warri gaara qullaa’aa gubbaatti isaa wajjin turre immoo,sagalee waaqa irraa isaaf dhufe kana dhageenyeerra ” jechuun gaara sana qulqulluu jedheera.(2fa.phex.1:16-18) kuni hundi Kakuu Haaraa keessatti kan argamu dhiiga Kiristoos irratti kan hundaa’e fakkenya bakkeen qulqullaa’oo (ቅዱሳን መካናት ) faadha.
Bakki qulqulluu kana kan filate,kabaje fi qulqulleesse Waaqayyo mataasaa dha. Akkasumas Kakuu Moofaa keessatti mootichi Solomon Waaqayyoof kan tahu Bataskaanaa erga ijaaree xumuree Waaqayyoo bakka qulqulluu mootichi Solomon kadhaa isaa itti dhiyeesse dha (2ffa sena bara 6:18-32,7:1-18). Kanaafidha egaa Waaqayyo bakka qulqulluu kan qulqulleesse bakka kabajaan kan guutame kan jenneefuu.
Haratoo Dabre Tsiyoon Qulq.Maariyaam(Horro Guduruu Wallaggaa)
Guyyoota qulqullaa’oo (ቅዱሳን ዕለት) :-Waaqayyoo hojiiwwan gurguddaa guyyaa itti hojjete dha.(seera uum.2:2-3) Waaqayyoo guyyaa torbaffaa eebbise,qulqulleesses. Kanaaf guyyaa waaqayyo itti dhalate, fannifame,cuuphame,du’aa ka’e,afuura qulqulluu ergamootaf erge fi kkf guyyoota qulqulluu jedhamu.
Qodaa ykn mi’a qulqulluu (ቅዱሳን ንዋያት):-mini mana qulqullummaa keessatti tajaajilan kun qulqulluu dha.
Namoota qulqulluu (ቅዱሳን ሰዎች):-Namootni Qulqulluu hojii garaa garaaf garuu kaayyoo tokkoof Waaqayyo kan isaan waame dha. Waamamuu qofa otoo hin tahin kan waamaman keessaa adda bahanii kan filatamani dha. “Kan waamaman baay’ee dha kan filataman garuu muraasa dha.” Kan jedhame kanaafi. (Mat 22:14). Namoota waaqayyo sirriitti amananii karaa Isaa irra deemani dha. Isaanis:Qulqullota Raajotaa(ቅዱሳን ነቢያት),Qulqulloota Duuka Buutotaa(ቅዱሳን ሐዋርያት),Qulqullota Toltoota (ቅዱሳን ፃድቃን),Qulqulloota Wareegamtoota (ቅዱሳን ሰማዕታት),Qulqullota Abboolii(ቅዱሳን አበዉ),Mootota Qulqullootaa(ቅዱሳን ነግስታት),Qulqulloota Beektotaa(ቅዱሳን ሊቃዉንት),Qulqulloota Phaphaasii(ቅዱሳን ጳጳሳት),Qulqulloota Monokosaatii(ቅዱሳን መነኮሳት), isaan keessaa muraasa isaanii akka armaan gadiitti haa ilaallu.
Qulqulloota Wareegamtoota(ቅዱሳን ሰማእታት):-Du’aa fi gidiraa adda addaa otoo hin sodaatiin waa’ee waaqayyoo kan dhugaa bahani dha….(Ibira.11:8:-)dhugaadhaaf reebamanii qoramanis magaaziidhaan tarsaafaman,albeedhaanis ajjeefamanis hunda dhabanii gidiraaf ta’ani. Fkf: Qulq. Isxiifanos,Qulq. Giyorgis,Qul.Morqoriyos
Qulqulloota Toltoota (ቅዱሳን ጻድቃን);-Warri kuni immoo akkuma gooftaan gadaamii Qoronxositti galee guyyaa 40 fi halkan 40 soome fi kadhate, isaanis isa hordofanii kan qaban dhiisanii,addunyaa tuffatanii,gidiraa adda addaa fudhatanii,monokosanii bahitaawwii ta’anii gadaamiikanjiraatanidha.Fkf:Qulq.Inxoos,Qulq.Phaalamon,Qulq.Teklehayimanot.
Qulqulloota Beektota(ቅዱሳን ሊቃወንት):-warri kuni immoo akkuma gooftaan addunyaa kana irratti waggaa sadii fi ji’a sadii barsiise,fakkeenya godhatanii addunyaa kana warra barsiisani dha. Fkf :Qulq. Atinaatiwoos,Qulq.Yohaannis Afewerq,Qulq.Qeerlos fi kkf dha.
Kitaabolii Qulqullaa’oo (ቅዱሳን መጻሕፍት)፡Kitaabolii qulqulluu kan jedhaman kakuu Moofaa fi Haaraa kan monokosotaa fi Beektotaa akkasumas Kitaabota dhalatoo faadha. Qulqulloonni Raajotaa fi Duuka Buutotni afuura qulqulluun gaggeeffamuunbaroota garaagaraa Afaan (qooqa) garaa garaatiin kan barreessan,soba fi shakkii irraa adda kan ta’an,namaan sadarkaa qulqullummaa kan geessisu kan ulfina qaban tahuu isaanii Kakuu Moofaa fi Haaraa walitti kan qabate dha.
Fakkiiwwan Qulqullaa’oo (ቅዱሳት ሥዕላት): Mana Kiristaanaa keenya keessatti Waaqayyoon,Dubre Qulqulleettii Maariyaamiin,Duuka Buutotaa,Toltoota,Wareegamtoota fi Beektotaa kan ibsan fakkiiwwan baay’een jiru. Qulqulluu kan jedhamaniifis:
Addunyaa foonii kan ibsan fakkiiwwan addunyaa irraa gonkumaa adda tahuu isaaniiti.
Fakkiiwwan mataansaanii raajota garaa garaa waan raawataniif qulqulluu isaan jechisiiseera.
Fakkiiwwan Qulqullootaa ta’uun isaanii qulqulluu jechisiisera.
Hiikaan Dn Zalaalam Daggafaa
Dubbii Qulqullootaa kan yaa’ii mooraa
http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png 0 0 EOTC Afaan Oromo http://eotcmk.org/ao/wp-content/uploads/mk-logo-header-ao.png EOTC Afaan Oromo2016-02-09 05:57:252018-10-26 09:21:14Dubbii qulqullootaa Kutaa-1ffaa
“Hojii Qulqullummaa Hunda Raawwachuun Ni Barbaachisa!” Maat 3:5 Yaa’ii mooraa